South Africa Closes All Land Borders – Pindula News
Africa	January 12, 2021
South Africa Closes All Land Borders
South Africa has closed all of its 20 land border crossings until at least 15 February 2021 in a move meant to curb the spread of the coronavirus.
In an announcement on Monday night, South African President Cyril Ramaphosa said crossings will only be permitted under limited circumstances but did not reveal when the new policy will be implemented. He said:
South Africa’s busiest points of entry, including Beitbridge, Lebombo, Maseru Bridge, Oshoek, Ficksburg, and Kopfontein will all be affected by the new directive.
The closure of the country’s borders follows weeks off congestion at the Beitbridge border with Zimbabwe and Lebombo post with Mozambique.
The bottlenecks, emanating from thousands of people travelling for the festive season and other returning to work, or escaping a hard lockdown in the case of Zimbabwe, have described as “super-spreader” events.
Next » Twitter Condemns Blocking Of Social Media Apps In Uganda